Nhau - Hydraulic muchina
musika muJiangsu, Zhejiang, Shanghai, Yangtze Rwizi Delta, Pearl Rwizi Delta, inowanzo shandiswa mukuyedza pombi senge isina musono simbi pombi, isina simbi pombi, titanium chiwanikwa pombi, mhangura pombi, aluminium pombi. Tenet yedu hombe tenet ndeye kuburitsa hydraulic yekudhinda kuti ipe yepamusoro uye yemhando yepamusoro yekuyedza michina yekuzadza mukaha mumusika. Iyo hydraulic yekudhinda inogona kukamurwa kuita otomatiki mhando uye echinyorwa mhando. Rudzi rwemanyoro runogona kuyedza mapaipi mana panguva imwechete, asi inoda basa remaoko. Positioning, kuiswa chisimbiso, kuomesa uye kudzvanya kunoitika. Kureba kwepombi kunogona kugadziridzwa ne2-15m kusangana nezvinodiwa zvakasiyana zvisina musono pombi mutengi.
Otomatiki mhando: imwechete chubhu inogona kuyedzwa panguva. Iyo chubhu inoerekana yapinda mudura, otomatiki inogadzira zvinhu, otomatiki mhando, zvinzvimbo, zvinotsvaira, zvisimbiso, zvinosungisa uye zvinodzvanya zvese otomatiki; iyo chikamu chezasi rakadzika rongedza otomatiki zvigadzirwa zvechokwadi uye zvakaremara. Inoita basa rakakosha mukugadzirwa chaiko. Imwe ndeye kusevha mutengo, asi kuchengetedza basa uye kugadzirisa mwero wekumutsiridza wepombi.
Iyo hydraulic yekudhinda inogadzirwa nekambani yedu inoshandiswa zvakanyanya mukugadzirwa kwehunhu kugadzirwa kwevagadziri vepaipi, uye yakakosha uye yakakosha kuona uye yekushandisa nyunje. Iye zvino yakagadziriswa zvinobudirira: bhuku remhando uye otomatiki mhando. Gamuchirai vatengi vatsva nevakuru kuti mutaurirane!